Shirkadda Looper flange ee Shiinaha iyo Warshadda | Zhaofeng
Fudud iyo xoog sare: Cufnaanta maaddada ee alaabooyinka FRP caadi ahaan waa 1.8 ～ 2.1g/cucm, oo ku saabsan 1/4 ～ 1/5 ee birta. Awoodda gilgilka hoop -ka waa MP300MPa, oo ka sarreeya birta.
Iska caabbinta kiimikada iyo nolosha adeegga dheer: FRP waxay leedahay iska caabin daxalka kiimikada oo aad u fiican. Warbaahinta wax halawda, FRP waxay muujinaysaa ka sarrayn aan la mid ahayn qalabka kale. Maaddooyinka matrixka ee kala duwan waxay u adkaysan karaan asiidhyo kala duwan, alkalis, cusbada iyo dareeraha dareeraha ah. .
Naqshadeyn xoog leh: FRP waxay hagaajin kartaa astaamaha jirka iyo kiimikada ee badeecadda iyadoo la beddelaayo isku-daridda alaabta ceyriinka ah, dhumucda lakabka dahaarka gudaha, lakabka qaab-dhismeedka, lakabka ka-hortagga gabowga dibadda iyo hannaanka sameynta si loo habeeyo jirka iyo kiimikada sifooyinka alaabta si loo daboolo baahiyaha warbaahinta kala duwan iyo xaaladaha shaqada, Si loo gaaro wanaajinta dhinac kasta.
Xirfad galaas farsameysan oo dhaawacday farsamo ayaa xoojisay xusullada caagga ah, shaaha, daboollada iyo rakibidda tuubooyinka kale. Fiilooyinka tuubooyinka ee ay soo saarto geedi socodka qalooca xarigga toosan waxay u adkeysan karaan xoogag dibadeed oo weyn. Hababka wax soo saarka ee ku rakiban biibiile biraha galaas way kala duwan yihiin, iyo habka wax soo saarka ee rakiban biibiile biraha galaas waxaa loo dooran karaa sida ay nooca iyo tilmaamaha rakiban biibiile loo baahan yahay. Ku rakibida biibiile biraha dhalada ah waxay leeyihiin sifooyin jidheed oo aad u wanaagsan. Waxaan u isticmaalnaa hab kasta si aan ugu soo saarno wax soo saarkooda, kaasoo aad ugu habboon uguna dhaqso badan. Ku rakibidda biibiile biraha dhalada ah asal ahaan waxay u qaybsan yihiin laba qaybood, oo ah nooca xidhiidhka qoyan iyo sameynta saxaafadda qalalan. Tusaale ahaan, marka loo eego astaamaha geedi-socodka, waxaa jira wax-ka-samaynta gacanta, wax-ka-samaynta laminate, habka RTM, habka fidinta, wax-ka-qabashada cadaadiska, wax-ka-qabashada dabaysha iyo wixii la mid ah. Gacan-dhigistu sidoo kale waxaa ka mid ah habka gacanta-dhigidda, habka saxaafadda boorsada, habka buufinta, habka qoyan ee cadaadiska hooseeya iyo habka fidinta gacanta ee aan caaryada lahayn.
Hore: FRP Flange tee
Xiga: Xiriirka flange